As of Fri, 05 Jun, 2020 16:30
आज विश्वका विभिन्न देशमा रहेका ६५ लाखभन्दा बढी मानिसमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसले दिन¬–प्रतिदिन नेपालमा पनि संक्रमित बिरामीको दर नयाँ उचाइमा पुग्दै गइरहेको छ । सोमध्ये मृत्युुदर पनि दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । त्यस्तै अघिल्ला वर्षहरूदेखि नेपालमा बर्सेनि फैलिन थालेको विभिन्न सरुवा रोगको प्रकोप पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।
जेठको महिना, उखरमाउलो गर्मी हुनुपर्ने हो । तर, यो वर्ष न तराई न हिमाल । खासै गर्मी बढेको छैन । सायद चैतदेखि निरन्तर वर्षा भएर होला । जेठमा देखिने धाँजा फाटेका खेत हिलाम्मे छ । लेकाली क्षेत्रको मुख्य बाली आलु भित्र्याउन सकेका छैनन् । बदलिएको मौसमसँगै खेतीपाती गर्न र अन्नबाली थन्क्याउन असहज महसुस हुन थालेको छ । खैर, दिउँसोतिर घरायसी काममा व्यस्त थिए । पत्रकार आनन्द गौतमले सोधे, “पाथीभरा जाने कि ?” जान्छु भनें । प्रश्न गरें, “तर, कसरी ?” गौतमले भने, “काफ्लेपार्टीसम्म गाडीमा । तपाईंसहित ४-५ जना हुनुहुन्छ ।” नजिकको तीर्थ सबैको हेंला भनेझैं पाथीभरा नगएको निकै वर्ष भएको थियो । पशुपतिको दर्शन सिद्राको व्यापार भनेझैं दर्शन र रिपोर्टिङ गर्न तयार बनेँ । पाथीभरा धार्मिक आस्था र प्राकृतिक तथा जैविक विविधताको ‘ड्रिमल्यान्ड’ पनि हो ।
वैश्विक महामारी कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि नेपालले चैत ११ गतेबाट सुरु गरेको बन्दाबन्दी तेस्रो महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ । यद्यपि यस रोगबाट संक्रमित हुनेको सङ्ख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । चीनमा लकडाउन सुरु भएको ७६ औं दिनपछि जनजीवन सामान्य भएको थियो, जसअनुसार नेपालको जनजीवन सामान्य हुनुपर्नेमा कोरोना संक्रमण मिटर उल्टो दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । सरकार कोरोनाको पहिचान, रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा संवेदनशील नदेखिएको आरोप स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारहरूलगायत विपक्षी राजनीतिक दलहरूले समेत लगाएका छन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्को बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा बहुदलीय व्यवस्थापछि लगातार तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा वर्तमान अर्थमन्त्री दोहोरिनुभएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र लगत्तै भएको चुनाव र नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारका अर्थमन्त्रीको हैसियतले तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको तीनवटा बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ र खानेपानीलाई महत्वका साथ गाउँगाउँमा सडक सन्जाल विस्तार र दीर्घकालीन विकासका अवधारणाहरू बुनिएका थिए र खुला अर्थनीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उद्योग व्यवसायको स्थापना, सहकारी बंैकिङ क्षेत्रमा सबैको पहुँच हुने गरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइएको थियो ।
विश्वका २ सयभन्दा बढी देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिरहेको छ, जसका कारण अधिकांश देशले आ–आफ्नो देशलाई लकडाउनको माध्यमद्वारा सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्र्दै आएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या तथा अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा पनि कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ । यसका कारण देशव्यापी लकडाउनलाई बढाउँदै लगेको छ । देशमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै व्यवसाय बन्द छन् । लकडाउन बढाउँदै जाँदा भारतमा आर्थिक संकट आउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
हालको अवस्थामा संसारका सबैजसो राष्ट्र कोभिड–१९ को संक्रमणले निम्त्याएको महासंकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण स्वस्थ्य संकटमात्र नभई आर्थिक र वित्तीय संकटको मारमा व्यक्तिदेखि संघसंस्था, सेवा–व्यवसाय, उद्योग प्रतिष्ठानलगायत सम्पूर्ण संगठित–असंगठित संघसंस्थालाई नराम्रोसँग दूरगामी आर्थिक प्रभाव पारेको जगजाहेर नै छ ।
विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र देशको आधारभूत उत्पादक र जीवनदायिनी शक्ति किसान वर्गको उत्थान र प्रगतिका निमित्त जस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिनुपथ्र्याे, वर्तमान सत्ता र सरकारले त्यस्तो नीति र बजेट दिन सक्तैन भन्ने कुरा फेरि पनि प्रस्ट भएको छ ।
विश्वका करिब १ सय ७२ मुलुकमा नेपालबाट दक्ष, अर्धदक्ष र न्यून दक्ष (अदक्ष) जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको तथ्याङ्क छ । झन्डै ४५ लाख जनशक्तिले विदेशबाट उनीहरूको श्रम र पसिनाले कमाएको रकम विप्रेषणका रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ । यी जनशक्तिमध्ये धेरैजसो विपन्न परिवारबाट र ग्रामीण भेगबाट जाने गरेको देखिन्छ । रोजगारीको अतिरिक्त उच्च अध्ययनका लागि युरोपका मुलुकहरूलगायत अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, सिंगापुर र दक्षिण एसियाली देश भारत, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जापान, बंगलादेश आदिजस्ता मुलुकमा विद्यार्थीका रूपमा गएका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले विश्वको अर्थतन्त्र नै खस्किसकेको अवस्था रहेको छ । लाखौं मानिसले रोजगारीमा फर्कन नसक्दा लाखौंको रोजीरोटी गुमिसकेको अवस्था छ । यसले विकास–निर्माणको काम मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजामा पनि निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ भने मुलुकको पँुजीबजारमा पनि त्यत्तिकै असर गरिरहेको हामी अनुमान लगाउन सक्छौं ।
आम सर्वसाधारणका मनमा लकडाउनले विश्वको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, अब कसरी पुनर्जीवन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जेको पाइन्छ । यस लेखमा विश्वभरका सरकारहरूले कसरी अर्थतन्त्रलाई सामान्य बनाउँछन् भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । लकडाउनको कारण मानिसहरूले आयआर्जन गर्ने र उपभोग गर्ने मात्रा घटेको छ । सरकारहरूले नागरिकको आयआर्जन र उपभोगमा कर लगाएर राजस्व प्राप्त गर्छन् । त्यसैले सरकारहरूको आम्दानी कम हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य सेवा र राहत वितरणमा सरकारहरूको खर्च भने बढ्दै गएको छ । बढ्दो खर्च धान्न सरकारहरूले राजस्व कहाँबाट प्राप्त गर्छन् ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने पनि एउटा स्वस्थ व्यक्तिले प्रतिवर्ष ९१ लिटर दूध पिउनुपर्छ । तर, औसत नेपालीले ७१ लिटर मात्र दूध पिउने गरेको तथ्याङ्क छ । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भनिन्छ । करिब ६६ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषिमै आश्रित छन् पनि भनिन्छ । यो अवस्थामा हामीले किन्दै गरेको दूध नेपाली किसानकै गोठबाट आएको हुनुपर्ने हो । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । विदेशबाट आयात गरिने पाउडर धूलोलाई दूधको रूप दिएर बजारसम्म फैलाउने गरिन्छ ।